Hiran State - News: Ururkii Dooxada Shabeele ee loaga dhawaaqay Hiiraan oo laga masaafuriyey Feer Feer
Ururkii Dooxada Shabeele ee loaga dhawaaqay Hiiraan oo laga masaafuriyey Feer Feer
Hiiraan: (hiranstate.com)- Warar aanu ka heleyno xuud beenaada dalka Somaliya iyo Ethiopiya gaar ahaan magaalada Feer Feer ayaa sheegaya in maanta si rasmi ah hub ka dhigis loogu sameeyey gudoomiyahii ururkii dooxada Shabeele C/fataax oo ku magac dheeraa masuul sare.
Maamulka Dooxada Shabelle oo fadhigoodu ahaa degmada Feer Feer ayaa lagu dhawaaqay kedib dhismahii dowlad goboleedka Hiiraan State iyadoo ujeedadiisu aheyd sidii loo carqaladeyn lahaa maamulka ay juhdiga galiyeen shacabka reer Hiiraan.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in hogaamiyaha ururkaasi hubkii lagala wareegay inkastoo aan la garaneyn waxa ay isaga ku sameyn doonaan. masuul sare ayaa la sheegayaa inuu ciidamda dalka Ethiopiya ee ku sugan halkaasi qaarkood uu baray laashuush si uu danahiisa guracan ugu fushado halkaas sida laga soo xigtay qaar ciidamadiisa ka tirsanaa. laakinse talaabadani ayaa imaneysa xili shacabka Hiiraan ay qaati ka taagnaayeen dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ay bilahii la soo dhaafay halkaasi ka wadeen kooxdaasi.
waxey wararku sheegayaan in ay ciidamda kooxdasi intooda badan ay ka tirsanaayeen ururka Shabaab iyagoo sheegay in dhawr maalmood oo hore ay isku soo dhiibeen ciidamo gaaraya 15 dhalinyaro ah inkasta oo la sheegay in ciidankaasi aysan soo koosan oo ay ahaayeen kuwo hub ka qaadanayey goobta ay ku sugnaayeen kuwa Doxada Shabele
Wararka oo dhameystiran la soco ilaa berito
· admin on April 13 2011 22:28:01 · 0 Comments · 2401 Reads ·
14,585,564 unique visits